August 2017 – Arakan Times
ရခိုင်ပြည်မှ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတို့၏ ကြေကွဲဖွယ်ရာ နေ့ရက်များ။
August 30, 2017	Leaveacomment 420 Views
#Arakan Times Burmese 30/08/2017. သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှစ၍ ယနေ့အချိန် ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်းရှိ မောင်တော၊ ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်စတဲ့ ဒေသတွေမှာ စစ်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ အကြမ်းဖက်၊ သတ်ဖြတ်မှု၊ မီးရှို့ မှု တွေကြောင့် အိမ်ခြေပေါင်း ၃၀၀၀ထောင်ခန့် မီးရှို့ခံခဲ့ရပီး လူပေါင်း ၂၀၀၀ကျော် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ လူပေါင်း သိန်းချီကာ အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်ကာ တော၊တောင်ထဲမှာ ခိုအောင်းနေရပြီး တချို့ဟာ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကို ခိုလှုံနိုင်ရေးအတွက် နယ်စပ်ရှိ နတ်မြစ် နံဘေးတွေ စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာ၊ ပြည်တွင်း မီဒီယာများက သတင်းအမှောင်ချထားကာ အကြမ်းဖက်သမားများရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုရှိနေတာကြောင့် ရဲကင်းစခန်းများ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး ရခိုင်လူမျိုးများ အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရသောကြောင့် အိုးအိမ်ပစ်ကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်း ရိုဟင်ဂျာများ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ် မိးရှို့ကာ ...
Rohingyas are under attacks, at gun points and villages are on fire
August 30, 2017	Leaveacomment 389 Views
Rohingya activists call for “Urgent international aid” By @mir_sidiquee Myanmar’s systematic preplanned genocidal movement on innocent Rohingyas in Arakan is especially not to be implemented the recommendations on the final report and remarks of the Rakhine Advisory Commission led by former UN secretary Dr. Kofi Annan. Read here: https://lnkd.in/gThxqda Rohingya activist said “We must have rights to defend ourselves. We ...
August 28, 2017	Leaveacomment 547 Views
A middle school teacher, U Maung Ni, from ThihoKyun of Northern Maungdaw reported that Myanmar army burnt down their homes, killed 100s of civilians and alleged them Bengali terrorists. Maung Ni said “Military came to our village and started open fire on us on 26 August 2017. We all ran to save our lives. Later, army blazed our homes. Myanmar ...
Breaking News: IDP camps, villages in Rathedaung and Maungdaw are under arson attack
August 28, 2017	Leaveacomment 619 Views
28 August 2017 By Arakan Times The Myanmar military and BGP have set fire to Internally Displaced Person (IDP) camps and villages in Rathedaung Township and Maungdaw today at around 8: 00 am. According to our correspondent report, Myanmar military set fire to all the houses of Chin khali and Kutan Kauk villages under Rathedaung by firing launchers which are ...
Breaking News ရသေ့တောင်မြို့နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်း ၊ ကျေးရွာများ နှင့် မောင်တောမြို့နယ်ကျေးရွာများ မီးရှို့ခံရပြီ၊
August 28, 2017	Leaveacomment 563 Views
28 August 2017 #ArakanTimes ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ချိန်ခါလီ ကျေးရွာနှင့် ကိုးတန်ကောက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်း နှင့် ရွာရှိ နေအိမ်များကို ယနေ့ မနက် ၈ နာရီခန့်က မြန်မာ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များက လောင်ချာပစ် မီးရှို့လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ခြေ ၁၀၀၀ ခန့်ရှိပြီ ရွာထဲတွင် သေနတ်များဖြင့် တရစပ် ပစ်ခတ်နေကြပြီး ရွာသားများထိမှန်သေဆုံးနေတယ်လို့ သတင်းရရှိထားပါတယ်။ ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင့် တချို့ ရွာသားများသည် ထွက်ပြေးစရာနေမရှိဘဲ တောထဲ တောင်ထဲ ပိတ်မိနေကြပါတယ်။ အလားတူ မောင်တောမြို့နယ်တွင်လည်း၊ သ၀န်ချောင်း နှင့် ခွက်ချောင်းစတဲ့ ကျေးရွာများတွင်လည်း ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာဘဲ စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက မီးထပ်မံရှို့လိုက်ပါပြီ။ ပစ်ခတ်မှုတွေလည်း ရှိနေပါသဖြင့် လူသေဆုံးမှုများလည်းရှိနေပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့မှစ အချိန်အဟုန်မြင့်ကာ လုပ်ဆောင်လာသော အကြမ်းဖက်မှု၊ လူအများအပြားအား သေနတ်များဖြင့် ပစ်သတ်မှု ၊ ရွာလုံးကျွတ်မီးရှို့မှုတွေ ...
Myanmar military intensifies deadly crackdown and home torching in Northern Arakan
August 28, 2017	Leaveacomment 344 Views
27 August 2017 By Arakan Times Myanmar military and Border Guard Police are jointly carrying out intensified deadly attack and arson on Rohingya civilians in Maungdaw, Rathedaung and Buthidaung. According to our correspondent report, the Myanmar joint forces of army and BGP entered Shwet Pyin Rohingya village in Zay Di Pyin, Rathedaung on 27 August at around 3: 00 pm ...